ဝါရှင်တန် | JPMA, Inc
ရန် text "WIC" 96859
Q: ဘယ်အချိန်မှာငါ WIC ကဒ်ရကြလိမ့်မည်နည်း
A: ငါတို့သည်လည်းဤအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ! WIC ကတ်များသင့်ဒေသခံ WIC ရုံးမှလာမယ့်အခါသင့်ရဲ့ WIC န်ထမ်းကိုမေးပါ။
Q: အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ငါ့ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမမွငျနိုငျမလဲ
A: ကျနော်တို့ WICShopper app ကိုနှင့်သင်၏ WIC အစားအသောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုသေချာစေရန်ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့သောအမှုအရာရှိပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့အနာဂတ်၌သင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်!
Allowed - ဤပစ္စည်းများကိုဝါရှင်တန် WIC အဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစားအသောက် WIC ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်သိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ သိရန်အရာတစ်ခုမှာသင်တစ်ဦးကို item ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်မဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်သင် WIC နှင့်အတူကမဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ WIC အကျိုးအမြတ် WICShopper app ကိုလင့်ထားသောသည်အထိ, ဒီ "ခွင့်ပြု" မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင့်မိသားစုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ပြင်လုံးကိုနို့ရရှိသွားတဲ့။ သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာတစ်ဦးတည်းနှစ်အရွယ်ကလေးကရှိမထားဘူးဆိုရင်, မြေတပြင်လုံးနို့သင့်ရဲ့ WIC အစားအသောက်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်သည်စစ်ဆေးမှုများရပ်တည်ချက်မှာမြေတပြင်လုံးနို့ကိုဝယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မ WIC ကို item - ဤဝါရှင်တန် WIC ဤအကြောင်းအရာအားအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေဆိုလိုသည်။ သင် WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုအကို အသုံးပြု. အသိပေးနှင့်အတူဤအစာကိုဝယ်နိုင်ဖြစ်သင့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!" ဒီ app ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် [HC (3] ။
ဝါရှင်တန် WIC အစားအသောက်စာရင်း Approved
JPMA, Inc အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး | မူပိုင် 2012 - 2019 | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။